छालामा सेतो दाग हानिरहित वा खतरनाक पनि हुन सक्छ। – Noor Health Life
छालामा सेतो दाग हानिरहित वा खतरनाक पनि हुन सक्छ।
जीवनको विभिन्न चरणहरूमा, हाम्रो छाला, विशेष गरी अनुहारको छालामा धेरै परिवर्तनहरू हुन्छन्, जसको फलस्वरूप कहिले नङ, पिम्पलहरू असुविधा हुन्छ, कहिले दागहरू, जुन कहिले आफैं वा उपचार पछि निको हुन्छ। तथापि, दुई प्रकारका छालाको दागलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, अनुहारको कुनै पनि भागमा पोलेको, काट्ने, कुनै पनि रोग वा गर्भावस्था, गम्भीर रक्तअल्पता वा औषधिको प्रभावले गर्दा अनुहारको कुनै भागमा पुतलीको रूपमा देखा पर्ने कालो दागहरू, यदि समयमै ध्यान दिएमा। प्रयोग गरिँदैन र डाक्टरको निर्देशनहरू पालना गरिन्छ, त्यसपछि यी दागहरू हराउँछन् वा हराउँछन्।
तर, अनुहार, घाँटी, काँध, छाती, ढाड वा तिघ्रा जस्ता शरीरको कुनै पनि भागमा सेतो दाग देखा परेमा यो चिन्ताको विषय हो, जसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। यी सेतो दाग चार प्रकारमा विभाजित छन्। पहिलो प्रकारमा साना सेतो, हल्का खैरो रङ्गहरू हुन्छन्, जुन हानिरहित र उपचारयोग्य हुन्छन्। तिनीहरू सानो फंगसको कारणले गर्दा छालाको सतहमा दागहरू निम्त्याउँछ। यी दागहरूको सतह थोरै सुन्निएको छ र सामान्यतया थोरै घर्षण संग गायब हुन्छ। यी दागहरू गर्मीमा बढी स्पष्ट हुन्छन् र जाडोमा फीका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ तिनीहरू अत्यधिक पसिनाको साथ देख्न सकिन्छ, तर नुहाउँदा अलि हल्का हुन्छ। कालो रंग भएकाहरूको लागि, यी सेतो दागहरू छालामा टाढाबाट देखिन्छन्, तर गोरो रंग भएकाहरूका लागि तिनीहरू गुलाबी हुन्छन्।
वैसे, यी दागहरूले चिलाउने कारण गर्दैन, तर कतिपय अवस्थामा चिलाउने पनि रिपोर्ट गरिएको छ। यदि घरको एक जना व्यक्ति यी सेतो दागको शिकार भएमा अन्य मानिसहरूलाई पनि असर हुन सक्छ। तसर्थ, बिरामीले उपचारसँगै सावधानी अपनाउनु राम्रो हुन्छ। उदाहरणका लागि, तौलिया, रुमाल, कपडा, आदि जस्ता तपाईंले प्रयोग गर्ने वस्तुहरू अलग गर्नुहोस्।
दोस्रो प्रकारमा केटा र केटीहरूको अनुहारमा रफ सतह भएका गोलो, सेतो दागहरू समावेश हुन्छन्। कहिलेकाहीँ छाला सुकेर सेतो भएजस्तो लाग्छ, चिलाउँदैन। यी सेतो दागहरू बारे सामान्य गलत धारणा यो छ कि यो क्याल्सियमको कमीले हुन्छ, तर यी दागहरूका अन्य धेरै कारणहरू छन्, जसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बच्चाहरूको स्वास्थ्य खराब छ, तिनीहरू घाममा पर्दा पनि अनुहारहरू हुन सक्छन्। यी स्थानहरूबाट पनि प्रभावित हुन्छ। साथै, कतिपय अवस्थामा पेटमा कीरा लाग्ने गर्छ । यी दागहरू निधार, गाला, चिउँडो र कहिले काँही घाँटीमा पनि देखा पर्छन्, तर तिनीहरू संक्रामक छैनन् र उपचार बिना आफैं हराउँछन्।
तेस्रो प्रकारमा कुष्ठरोग समावेश छ, जुन एम. कुष्ठरोग नामक ब्याक्टेरियाबाट हुने संक्रामक रोग हो। यो रोग सामान्यतया छाला र स्नायुहरु लाई असर गर्छ। यसका चार चरण छन्। पहिलो चरणमा बिरामीको शरीरमा विशेषगरी गाला, पाखुरा, तिघ्रा र नितम्बमा सेतो घेरा देखिन्छ र यो सुन्न महसुस हुन्छ। यो रोगको एक धेरै महत्त्वपूर्ण लक्षण हो, यस चरणमा रोग प्रारम्भिक चरणमा भएकोले, यदि सही निदान र उपचार तुरुन्तै उपलब्ध गराइयो भने रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। ढिलाइ भएमा, रोग छिटो फैलिन सक्छ र निको नहुन सक्छ।
चौथो प्रकारमा चोटहरू समावेश छन्। यो रोग संक्रामक छैन। सुरुमा शरीरको कुनै पनि भागमा सेतो दाग देखिन्छ र यी दागको बीचमा कपाल भएमा त्यो पनि सेतो हुन्छ । यदि यी दागहरू टाउकोमा छन् भने, कपालको फोलिकल्स सेतो हुन्छ।
कतिपय अवस्थामा यो दाग वर्षौंसम्म उस्तै रहन्छ भने कतिपयमा यति छिटो फैलिन्छ कि पूरै शरीर सेतो दागले ढाकेको हुन्छ । झाडापखाला भएका बिरामीहरूले घामको तीव्रता सहन सक्दैनन्, साथै उनीहरूलाई कुनै असुविधा हुँदैन र समग्रमा उनीहरू स्वस्थ रहन्छन्।
त्यहाँ केही सेतो दागहरू पनि छन् जुन हामीले निम्तो दिन्छौं। यस्ता दागहरू प्राय: अनुहारको सौन्दर्यको कारणले हुने गर्दछ, जस्तै धेरै संख्यामा महिला र युवतीहरूले रंगलाई सेतो बनाउन बारम्बार ब्लीच क्रिम प्रयोग गरेमा, यसको परिणाम स्वरूप उनीहरूको प्राकृतिक छाला प्रभावित हुन्छ।
साथै, एलर्जीको अवस्थामा, चिलाउने र जल्ने दागहरू हुन सक्छ, त्यसैगरी, रासायनिक मेहंदीको प्रयोगले पनि छालामा दागहरू निम्त्याउन सक्छ। तर, दाग कालो होस् वा सेतो होस्, त्यसलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन र आफै उपचार गर्नुको सट्टा तुरुन्तै छाला विशेषज्ञसँग सम्पर्क गरी पूर्ण उपचार गराउनुपर्छ।शरीरमा यी सेतो दाग किन देखिन्छन् ?
तपाईंले प्रायः मानिसहरूलाई उनीहरूको छालामा देखिने सेतो दागहरू देख्नुभएको छ, तर यो किन हुन्छ र यसबाट बच्न कसरी सम्भव छ?
यो रोग वा रोग मानिसहरूको लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो, जुन धेरै महत्त्वपूर्ण पनि छ।
नूर हेल्थ लाइफ इन्स्टिच्युटका विशेषज्ञ डाक्टर, प्रोफेसर, सर्जन, परामर्शदाता। यी सबै विज्ञहरूका अनुसार नूर हेल्थ लाइफले तपाईलाई सबै भन्दा राम्रो दिन सक्छ। र नूर हेल्थ लाइफले फेरि पनि गरिबहरूलाई सहयोग गर्न र अस्पतालमा रहेकाहरूलाई मद्दत गर्न आग्रह गर्दछ। नूर हेल्थ लाइफले खाँचोमा परेका बिरामीहरूलाई मद्दत गर्दछ। फेरि पनि म तपाईंलाई नूर हेल्थ लाइफलाई समर्थन गर्न र नूर हेल्थ लाइफ मार्फत गरीब बिरामीहरूलाई मद्दत गर्न आग्रह गर्दछु। यहाहरु सबैलाई धन्यवाद। नूर हेल्थ लाइफको कुनै पोस्ट पढ्नुभयो भने ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। पढ्नुहोस्।
बर्सा भनिने यो रोग माछा खाएपछि दुध पिउनाले हुने प्रतिक्रिया हो भन्ने विश्वास गरिन्छ तर चिकित्सा विज्ञानले यसलाई अस्वीकार गर्छ।
वास्तवमा, यो तब हुन्छ जब छालालाई यसको प्राकृतिक रङ दिने कोशिकाहरूले निश्चित रङ्गहरू उत्पादन गर्न बन्द गर्छन्।
छालामा देखिने ६ रोगहरू
नूर हेल्थ लाइफका अनुसार यो रोग सामान्यतया सानो दाग वा सेतो दागको रूपमा देखिन्छ।
विश्वव्यापी रूपमा 70 मिलियन मानिसहरूले यो रोगलाई संकुचित गरेका छन्, जसलाई अटोइम्यून रोग पनि भनिन्छ, किनकि जब यो उजागर हुन्छ, शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले कोशिकाहरूलाई आक्रमण गर्दछ जसले छिट्टै रंग पुनर्स्थापित गर्न काम गर्दछ।
यदि यो सुरुमा समातिएको छ, अर्थात्, छालामा दागहरू नदेखिँदा, तर रङ हल्का छ भने, छाला यसको मूल आकारमा पुनर्स्थापित हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
एसीको प्रयोगले छाला रोगको कारण : अनुसन्धान
वैसे, यस रोगको उपचारमा, विज्ञहरूको लक्ष्य भनेको छिट्टै रंगलाई पुनर्स्थापित गर्नु र यसको प्रभावलाई कायम राख्नु हो।
यस उद्देश्यका लागि केही स्टेरोइड क्रिमहरू सूजन नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ भने ओयन मिन्ट पनि लाभदायक हुन सक्छ।
कतिपय अवस्थामा थेरापीले अप्रभावित छालाको रङलाई सेतो दागलाई थप ध्यान दिनको लागि हल्का बनाउँछ।
हल्का थेरापी र शल्यक्रिया पनि विकल्पहरू हुन्। थप प्रश्न र उत्तरहरूको लागि तपाईंले इमेलबाट नूर हेल्थ लाइफ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई व्हाट्सएपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। noormedlife@gmail.com